Otu esi etinye GNOME 41 Desktop na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Na Mọnde, Nọmba 2, 2021 Na Mọnde, Nọmba 2, 2021 by Jọshụa James
Bubata ndetu tupu ịwụnye GNOME 41
Wụnye PPA achọrọ maka GNOME 41
Wụnye GNOME 41 Desktop Environment
Lelee GNOME 41 Desktop Environment
Nyochaa GNOME 41 Desktop Environment
Otu esi emelite GNOME 41 Desktop
GNOME 41 na-ewebata ọtụtụ mgbanwe site na mgbanwe a na-ahụ anya, ngwa ọhụrụ, na imegharị mgbanwe azụ azụ iji melite arụmọrụ. N'ozuzu, ọ bụ nkwalite siri ike sitere na GNOME 40 yana mmeghe nke onye ahịa desktọpụ ọhụrụ nke a na-akpọ Njikọ, ntọala mkpanaka ọhụrụ, ọtụtụ ọrụ emelitere, UI emelitere, na azụ-ngwụsị arụmọrụ, n'etiti ọtụtụ ihe mgbakwunye ndị ọzọ.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye ihe ọhụrụ GNOME 41 na desktọpụ Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa site na iji PPA site Taha Nouibat.
Emebere nkuzi a iji kwalite sistemụ Ubuntu gị gaa na GNOME 41 kachasị ọhụrụ site na iji PPA enweghị ntụkwasị obi. PPA nke a ga-arụnye bụ nke amara nke ọma ma bụrụkwa nke ọma na ọ nweghị ihe ọjọọ ọ bụla. Agbanyeghị, nke a apụtaghị na ọ dị mma iji na-enweghị ike nwelite mmelite na-akwụghị ụgwọ na-emebi sistemu gị.
Kwadebe ma nwee nkwado ndabere na mpaghara mgbe ị na-etinye ma na-emelite ngwugwu ọ bụla n'ọdịnihu metụtara GNOME 41 site na PPA a ma ọ bụ usoro ntinye ọzọ ị nwere ike ịhọrọ..
Mbụ, ị ga-achọ ịwụnye PPA atọ dị iche iche iji wụnye GNOME 41 nke ọma. Ndị PPA niile si n'otu onye na-elekọta ya Taha Nouibat.
Nke abuo, wụnye GNOME 41 PPA, nke achọrọ maka ụfọdụ ndabere achọrọ.
Nke atọ, wụnye GNOME 41 PPA maka ngwugwu ikpeazụ.
Mara, ị nwere ike ịhụ mmapụta mperi. Ị nwere ike ileghara ndị a anya ka ha ga-apụ n'anya ozugbo ị wụnye GNOME 41 ọhụrụ.
ụdị "Y," wee pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu. Nke a nwere ike iwe obere oge, ọkachasị na ngwaike dị ala.
Ozugbo ịmaliteghachi usoro Ubuntu gị, ị ga-ebu ụzọ bịa na ihuenyo nbanye ọhụrụ nke dị nnọọ iche.
Mbụ, ịkwesịrị ịgbanwe njikwa ngosi. Emere nke a site na ịpị bọtịnụ nhazi dị n'akụkụ aka nri elu nke mpio nbanye, n'aka nri nke aha njirimara gị, wee họrọ ya. "Ubuntu na Xorg" kama "Ubuntu" njikwa ngosi.
Ekele, ị tinyela GNOME 41 ọhụrụ na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.
Gbaa ụkpụrụ dabara adaba maka mmelite n'ọdịnihu maka GNOME 41 gburugburu desktọpụ yana ngwugwu ndabara Ubuntu 20.04.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye GNOME 41 Desktop Environment site na iji PPA nyere. Taha Nouibat.
N'ozuzu, GNOME 41 ga-adị nnọọ iche ozugbo ị gbanwere site na ndabara GNOME 38. Ụfọdụ n'ime mgbanwe ndị a na-ahụ anya bụ akụkụ windo gburugburu, ihe ngosi dị nro nke na-enye ya ọdịdị ọgbara ọhụrụ n'etiti ọtụtụ mgbanwe ndị ọzọ.
Ajụjụ ọzọ bụ ị kwesịrị ịkwalite na nke a? Enwere ike, mana kpachara anya, ị ga-eche nsogbu enweghị ike ihu, ngwugwu agbajiri mgbe PPA maka GNOME 41 tozuru oke. Ọ bụrụ na ị chere na ị nwere ike ijikwa nke a, wee gaa maka ya.
Categories Ubuntu Tags GNOME, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye ihe nchọgharị Opera na Fedora 35
Wenezde, Nọvemba 17, 2021 3:53 nke abalị
Daalụ maka ozi gị
Wenezde, Nọvemba 17, 2021 7:14 nke abalị
Enwere ụzọ isi gbaa Gnome 41 na Wayland (kama Xorg) na Ubuntu 20.04?
Ntuziaka a ọ ga-arụ ọrụ na Ubuntu 21.10?
Wenezde, Nọvemba 17, 2021 7:18 nke abalị
Ndewo, daalụ maka ozi ahụ.
Mba, ebe nchekwa a na-akwado naanị ntọhapụ Ubuntu LTS, ọ bụghị ntọhapụ obere oge ndo ikwu.
Wayland nwere ike ịrụ ọrụ mana enwere nsogbu, ebe ọ bụ na a ka na-arụ ọrụ na ibugharị m ga-arapara n'ahụ Xorg.
Wenezde, Nọvemba 24, 2021 2:06 nke abalị
Mana mgbe m ga-agbakwunye ebe nchekwa “x11” ọ na-egosi dịka -
[iamrup@palrup-Satellite-C640]:~$ sudo tinye-apt-repository ppa:devacom/x11 -y
Enweghị ike ịgbakwunye PPA: 'ppa: ~ devacom/ubuntu/x11'.
ERROR: '~ devacom' onye ọrụ ma ọ bụ otu adịghị.
Wenezde, Nọvemba 24, 2021 2:20 nke abalị
Naanị lelee na VM ọhụrụ Ubuntu, na-arụ ọrụ nke ọma. Detuo ya kpọmkwem iwu ị debere na ozi gị.
sudo tinye-apt-repository ppa:devacom/x11 -y
Ndo ịjụ ajụjụ nzuzu, ị na-eji Ubuntu 20.04 ziri ezi?
Satọde, Disemba 11, 2021 2:37 ehihie
Ndewo, daalụ maka ntuziaka nwụnye. Enwere m otu nsogbu, ahụghị m "Ubuntu x org" n'okpuru wheel cog (ntọala) na ihuenyo nbanye.
Nhọrọ ndị dịnụ bụ:-
Satọde, Disemba 11, 2021 3:25 ehihie
Ndewo Devin, daalụ maka ozi ahụ.
M tinyegoro nke a na mbụ ugboro ole na ole na Ubuntu 20.04 mana nke a bụ otu ọnwa gara aga, m ga-enyocha n'oge na-adịghị anya iji hụ ma ebe nchekwa ahụ agbanweela ma melite nkuzi dịka ọ dị mkpa maka ekele maka isi elu.
Enwere m ike ịjụ ma ị na-etinye nke a na Ubuntu 20.04 LTS na enweghị ntọhapụ ọzọ dị mkpirikpi dị ka Ubuntu 21.10? Ebe ọ bụ na PPA na-akwado naanị otu ụdị, a jụrụ m nke a ugboro ole na ole, naanị ogologo oge m chere na m ga-ajụ.
Ọzọkwa, ị maliteghachiri PC gị?
Mọnde, Disemba 20, 2021 10:11 nke ụtụtụ
Onye ọ bụla na-akpachapụ anya nke a, egburu onye njikwa ihe ngosi m.
na reboot enwere m ihuenyo oghere.
kwesịrị ctrl-alt f1 ma ọ bụ f4,
nbanye site na okwu na aka startx
wee pụọ na ihuenyo oghere,
FIX bụ, jiri aka wee banye ọzọ, STARTX
mgbe ahụ na njedebe,
sudo dpkg-hazigharịa lightdm
wee họrọ GDM ma ọ bụ GDM3 wee malitegharịa.
ihe niile dị mma mgbe ahụ.
Zaa ite4 ndu
Mọnde, Disemba 20, 2021 10:17 nke ụtụtụ
Daalụ maka ozi na ozi. M ga-agbakwunye ya na nchọpụta nsogbu.
Ahụghị m nke a n'oge ahụ, ejirila m PPA a mbụ, mana enwere m ekele maka ozi ahụ. O doro anya na onye ọzọ nwere ike ịhụ onwe ya n'ọnọdụ ahụ, ihe ndị a nwere ike ime.